Zọ Parts, Laser Ịcha Parts, ekwe Parts, ịgbado ọkụ Parts - Gemma
CNC zọ na punching
CNC ekwe ọrụ
ịgbado ọkụ ọrụ
Anyị factory enye dịgasị iche iche nke na-ụlọ ọrụ gụnyere zọ, Laser ọnwụ, ekwe, ịgbado ọkụ, ntụ ntụ mkpuchi, Assembly na na. Anyị nkà injinia na nkà na-arụ ọrụ ọnụ na-echepụta ihe ndị omenala metal akụkụ na mgbakọ na kwuru kpọmkwem ndidi.
Ningbo gemma Metal Product Co., Ltd bụ otu ọkachamara factory n'ilekwasị anya na omenala mpempe akwụkwọ metal Ụgha. Ọ na-emi odude ke Ningbo, East China, na-ekpuchi 8000 square mita na nwere gburugburu 50 ọkà ọrụ.
Ga-esi mara ihe banyere onye ọ bụla otu otu onye bụ mgbe e maka gị. Ha bụ ezigbo ndị guzo n'azụ ụlọ ọrụ nke ọma. Anyị bụ ndị mpako nke anyị ọkachamara ka ha bu isi ịnya ụgbọ ike na-eme ka azụmahịa gị na-eto eto ma melite ụbọchị.
Dị Oké Ọnụ Ahịa Metal CNC prototype Laser Cutting Parts
High-enwe Ịnụrụ Laser Ịcha CNC Metal zọ Parts
no.555 haifeng ụzọ, cidong binhan ọhụrụ ebe, Ningbo obodo Zhejiang china.